Qorax Madoowaad - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Qorax madoobaad)
1 Qorax Madoowaad
3 Taariikhda Qorax Madoowaadka
4 Qorax Madoowaadka Meereyaasha
Qorax Madoowaad[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Qorax Madoowaadku waa marka dayaxu kala dhexgalo dunida iyo qoraxda.
Qorax Madoowaad (Ingiriis: Solar Eclipse) waa marka dayaxu kala dhexgalo dunida iyo qoraxda. Qorax Madoowaadku wuxuu dhacaa wakhtiga maalintii taas oo ileyska qoraxdu ka qarsoomo dhulka.
Dayax Madoowaad ayaa lid ku ah Qorax Madoowaadka.
Waa been reer galbeedka
"Guud madoobaad" waxay dhacdaa marka Qorraxda gabi ahaanba laga qariyo dayaxa gadaashiisa. Hooska madow ee dayaxu wuxuu daboolaa oogada qorraxda ee aad u ifaysa. Tani waxay fududaynaysaa Corona in la arko.
Madoobaad-madoobaadku wuxuu dhacaa marka qorraxdu ay si toos ah uga danbeyso dayaxa, laakiin dayaxu wuxuu u muuqdaa mid yar. Tani waxay ka dhigaysaa Qorraxdu inay u muuqato sida giraan aad u ifaysa ama Dhacdada oo ku saabsan qaabka dayaxa.
“Madoobaad-madoobaadka isku-dhafka ah” (sidoo kale loo yaqaan “sanadle/guud”) wuxuu dhacaa marka ay u muuqato sida wadarta dayax madoobaad ee qaybo ka mid ah dhulka, iyo qorrax-madoobaadka qaybo kale. Dayax-madoobaadyada isku-dhafka ahi uma dhacaan marar badan sida qorrax-madoobaadyada kale.
"Qayb madoobaad" wuxuu yimaadaa marka dayaxu uusan si sax ah u dhexeynin qorraxda iyo dhulka, sidaas darteed gebi ahaanba ma qarinayo qorraxda. Tan inta badan waxaa laga arki karaa qayb weyn oo ka mid ah Dhulka.
Taariikhda Qorax Madoowaadka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Qorax Madoowaadka Meereyaasha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Aqoon Meere Dhul Cimiga Xidigaha
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qorax_Madoowaad&oldid=237267"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Luuliyo 2022, marka ee eheed 06:10.